एनआरएनएमा किन यस्तो ! हिक्मत रावल, नेपाली पत्रकार । - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > NRNA > एनआरएनएमा किन यस्तो ! हिक्मत रावल, नेपाली पत्रकार ।
August 14, 2019 August 14, 2019 Raju Thapa636
अचेल एनआरएन नेताहरुको चाल हेर विदेशी भूमिमा पनि दुर्गान्धित दलीय राजनीति गर्ने यिनको हाल हेर नेपाली नेताहरुको पुच्छर नसमाति आफ्नो अस्तित्व र व्यक्तिगत स्वार्थ सखाप हुन्छ भन्ने मानसिक त्रास छ हेर कस्तो अचम्म , विदेशी भूमिमा पनि काँगे्रेस, कम्युनिष्टको बासुरी बजाँउदै, त्यही धुनमा मख्ख परेको देख्दा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई बिर्सेर, विगतकै अभिसप्त राजनीति अलापेको देख्दा मानवजातिको यो अन्तिम थलामा पनि नेपालीसँग नेपाली लडेको देख्दा आश्चर्य लागेर आउँछ । हेर हिजो तिनै दलको दलदलमा दलिएका होइनौर मातृभूमिमा असह्य त्यही पीडामा बाँच्दा, जन्मेहुर्केको माटो छोडुनु परेको इतिहास होइनर तिम्रो फेरि आज किन त्यही दलदलमा ? एकचोटी तिमीले खाएको सपथसँगै मातृभूमितिर फर्केर हेर नेपालीका लागि नेपाली भन्ने विधिको मन्त्र पढेर हेर कहाँ पाउँछौ आफूलाई ? कहाँ पाउँछौ देशलाई ? आफ्नै पौरख र पसिनाले कमाएको तिम्रो परिचय दुषित राजनीतिमा फसिरहेको छ हेर त्यसैले आउ, आज फेरि सपथ लेउ तिमी बसेको देश र तिमीले छोडेको देशका नाममा भनः गैरआवासीय नेपाली जिन्दावाद, नेपाली एकता जिन्दाबाद । दलगत राजनीति मुर्दाबाद ।
स्थिति लगभग यस्तै छ विदेशका हरेक कुनाकाप्चामा । दुर्गान्धित नेपाली राजनीतिको संक्रमण फैलिदो छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरु यस्तै राजनीतिक संक्रमणबाट संक्रमित बनिरहेको तितो यथार्थ छ । करिव एक महिनादेखि म उत्तर अमेरिकी राज्यको भ्रमणमा छु । केही दिन अघि क्यानाडाको मिसिसागा, ब्राम्पटन लगायतका क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ । एक संचारकर्मी, पर्यवेक्षक भएर ठाउँ ठाँउमा जाँदा गैरआवासीय नेपाली संघ भित्र देखापरेको दलगत राजनीतिको विदिर्ण अनुहार देख्दा संक्षिप्तमा यो आलेख मार्फत केही भन्ने र सुझाव दिने प्रयास गरेको छु । कुरा क्यानेडियन गैरआवासीय नेपाली संघको मात्रै होइन, एनआरएनए क्यानाडा त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । कुरा विश्वव्यापी रुपमा नै गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाली दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल बन्ने दिशामा उन्मुख हुँदैछ भन्ने चिन्ता हो । सवैलाई थाहा नै छ, गैरआवासीय नेपाली संघ गैरआवासी नेपालीहरुको हकहितसँगै, दुईदेशीय सम्वन्ध विस्तार, नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउन सन् २००३ मा स्थापित एक, स्वतन्त्र, गैरराजनीतिक गरिमामय संस्था हो । तर अहिले आएर त्यही गरिमामय इतिहास बोकेको संस्थाको छवि धुमिल बन्दै जानु सवैको चिन्ता र चासोको विषय हो । संस्थामा राजनीति भइरहहेको विषय मात्रै होइन, पछिल्ला दिन नेतृत्वमै रहेका केही एनआरएन नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभका विषयमा संचारमाध्यममा जसरी आलोचित र विवादित बन्दै गएका छन त्यसले झनै एनआरएनको प्रतिष्ठा माथि आँच पुर्याउने काम गरेको छ । भलै उनीहरुमाथि लागेका आरोप सत्य होलान, नहोलान समयले छिनोफानो गर्ला तर गौरममय इतिहास बोकेका संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि नै यस्ता प्रश्नहरु तेर्सिनु हितकारी हुँदैन भन्ने मूल कुरा हो । अव एनआरएनएमा राजनीतिको कुरा गरौं । गैर आवासीय नेपाली संघको विधानको प्रश्तावनामा नै स्पष्ट लेखिएको छः एनआरएनए एक गैर राजनीतिक, गैर नाफामूलक एक चिरस्थायी संस्था हो । जसको मूल मन्त्र नेपालीका लागि नेपाली भन्ने हो । तर एनआरएनएका नेतृत्व तहका नेताहरुको व्यवहार, संस्कार विधानको त्यही प्रश्तावनाको खिलाफ अग्रसर बन्दै जानु विडम्वनाको विषय हो । स्थापनाकालदेखि नै उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, देबमान हिराचन, शेश घले र भबन भट्ट जस्ता व्यक्तित्वले नेतृत्व प्रदान गरेको संगठन हो गैरआबासीय नेपाली संघ अर्थात एनआरएन । गर्विलो इतिहास र पहिचानको जगमा उभिएको संस्था हो । नेपालको पूर्वाधार विकास, आर्थिक, सामाजिक हितमा एनआरएनले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण विषयलाई बिर्सिन मिल्दै मिल्दैन । गैरआवासीय नेपालीहरुले गरेको आर्थिक, सामाजिक सहयोगलाई अलग राखेर नेपालको स्मृद्धी र समुन्नतीको कल्पना गर्नु व्यर्थ नै हुन्छ । तर कुरा सहयोगको भन्दा पनि सहयोगीहरुकै संगठनको अस्तित्व पार्टीगत राजनीतिको अध्यारो खाडलमा जाँकिन लागेको विषयको हो । एनआरएनएमा राजनीतिक आगोको झिल्का यसरी सल्किराखेको छ कि एक दिन सिंगो संस्थाको प्रतिष्ठा खरानी बनाउन बेर छैन त्यो झिल्काले । त्यसैले पनि अहिले नै त्यो झिल्कोलालई मिल्काउनु पर्छ भन्ने मान्याता हो । आगोको झिल्का कहाँबाट आयो, कोले ल्यायो । को आगो सल्काउँदैछ । सवैलाई थाहा नै छ । थाहा हुँदा हुँदै पनि थाहा नपाए जस्तो गरी मौन रहनु वा आराजनीतिको आगो सल्काउन खोज्नेसँगै मितेरी लगाएर बस्न खोज्नु एनआरएन नेताहरुको गम्भीर त्रुटी हो ।
उदाहरण स्वरुप मैले क्यानाडाको मिसिसागा, ब्राहमटन लगायतका क्षेत्रमा भएको एनआरएनको निर्वाचन प्रत्यक्ष हेरे । जहाँ नेपालको दलीय राजनीतिको यति दुष्प्रभाव देखियो कि बयान गरी साध्य छैन । अन्यत्र पनि यो भन्दा फरक हुने कुरै भएन । एनआरएन मतदाताहरु स्पष्ट रुपमा नेपाली राजनीतिको दुई धुव्रमा विभाजित थिए । एक पक्ष प्रजातान्त्रिक अर्को वामपन्थी । एकले अर्कोलाई निषेध पार्ने नेपाली राजनीतिकै त्यही फोहोरी खेलको पुनरावृति यति टाढाको मुलुकमा भइरहँदा निश्चय नै आश्चर्य लाग्यो । मनमा नानाथरी प्रश्न उव्जी रहे । नेपालका प्रमुख दलका नेताहरु, तिन्का भातृसंगठनहरुले क्यानाडा, युरोप अमेरिका पनि नछोडने भए । नेपालमा जस्तै यहाँ पनि अराजनीति भित्र्याएर भाँडभैलो गर्ने भए । नेपालमा रहँदा तिनै युवाहरुलाई दुःख दिए । वाध्यता र विवसताले मुलुक छोडी सात समुद्रपारका यी देशहरुमा पुग्दा फेरि तिनै युवाहरुलाई प्रयोग गरी राजनीति गर्ने, गर्न लगाउने । यस्तै खेलमा नेपाली नेताहरुले आफू र आफ्नो पार्टीको भलो देखेका छन् शायद, त्यतापट्टि नजाउँ । नेपाली हुन वा गैर नेपाली, हरेकमा राजनीतिक आस्था हुनु स्वभाविकै हो । हिजो त्यही नेपाली संस्कारबाट हुर्के बढेका हौं सवै । तर धर्तीको यो कुनामा आउँदा नेपालबाट थुपै्र अधिकारहरु गुमाएर आउनु परेको सत्यलाई विर्सिनु हुँदैन । राजनीति छोडेर आयौं । परिवार छोडेर आयौं । देश छोडेर आयौ । कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकको हैसियत गुमाएर आयौ । फेरि किन यहाँ आएर राजनीति ? किन तिनै नेताको पक्षपोषण ? किन काँगे्रस, कम्युनिष्टको राजनीति ? यहाँ त सवै नेपाली भएर बाँच्नु पर्ने होइन र । एनआरएनए राजनीति गर्ने थलो हो र ! विशुद्ध गैर राजनीतिक संस्था हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै एनआरएनए भित्र किन राजनीति ? चिन्ताको विषय भनेकै यही हो । विश्वभरी लगभग ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरु छन । तिनले तत्तत् देशमा गर्ने व्यवहार र कर्मसँग नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि हरेक गैरआवासीय नेपालीले यो कुरा मनन गर्नै पर्ने हुन्छ । संस्थाको नेतृत्व लिने नाममा कोही यदि फेरि पनि नेपाली राजनीतिक दलका नेताको आशिर्वादमा वा ती दलका भातृसंगठनको इसारामा एनआरएनलाई अघि बढाउन खोज्छ भने त्यो उस्को कुचेष्टा हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । राजनीति नै गर्ने हो भने किन यहाँ, नेपाल नै फर्के भइहाल्यो नि । कि कसो । गैर आवासीय नेपाली अभियानलाई राजनीतिले रंग्याउनु हुँदैन । बरु आर्थिक स्मृद्धि, अधिकारको प्राप्ती, कुटनीतिक पहल, लगानी, पूर्वाधार विकासको पहलले सिंगार्नु पर्छ । गैर आवासीय नेपाली संघ राजनीतिक संगठन होइन । संस्था भित्र जवर्जस्त राजनीति लाद्दा एनआरएनको दीघकालिन योजना, अभियानमा दुरगामी असर पुर्याउँछ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ एनआरएन नेताहरुले । अव उनीहरुले स्पष्ट भन्नु सक्नु पर्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाइ अव एनआरएनएमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर भनेर । हामी आफ्नै बलिबुतामा एनआरएनलाई सुदृढ बनाउँछौ भन्न सक्नु पर्छ । त्यो भन्ने हैसियत अवको नयाँ नेतृत्वले राख्नु पर्छ ।